जोया प्रती जुन भाव जागेको छ, सबै विदेशी पाहुना प्रती जागोस | Mahesh Pathak
तर, के मिडियामा आएकी विदेशी महिला जोया प्रती मात्र सिमित हो त हाम्रो संवेदनशीलता? के अन्य विदेशी पर्यटकहरू प्रती पनि हामी उत्तिकै संवेदनशील छौं त?
फागुपुर्णिमा वा होली चाडले मलाई सधै झस्काउने गर्छ। रमाइलो गर्ने नाममा, रंग दल्ने नाममा धेरै विदेशी महिला पर्यटनहरुले नेपालमा यौन दुर्ववहार भोगेका छन्। के यो बेलामा हाम्रो संवेदनशीलता जाग्नु पर्दैन?
नेपालमा यात्रा गर्दा होस् वा कुनै पसलमा किनमेल गर्दा, विदेशी पर्यटकसँग मनलाग्दी पैसा लिने गरिन्छ। नेपाली र विदेशीलाई एउटै मुल्य गरियोस् भन्न खोजेको पक्कै होइन। तर, नेपालीसँग कति लिने र विदेशीसँग लिने भन्ने ठोस निति बनाएर पैसा लिनु पछ नि। यसो हुँदा उनीहरुले आफु ठगिएको महसुस त गर्ने छैनन्।
प्राकृतिक सुन्दरताले संपन्न हाम्रो देश नेपालले पर्यटन विकास बाट नै आर्थिक संवृद्धी हासिल गर्न सक्ने प्रचुर संभावना छ। त्यसैले, अतिथि देवो भव: हाम्रो व्यवहारमा झल्किनु अत्यावश्यक छ। हामी सबै विदेशी पाहुनाहरु प्रती उत्तिकै संवेदनशील बन्न सकौं, यहि कामना गर्दछु।
एक पटक बिचार गरौं, के एक पटक नेपाल आएका पर्यटकलाई पटक पटक नेपाल आउन मन लाग्ने वा उनिहरुले अन्य साथीहरुलाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण हामीले बनाउन सकेका छौं?
← BibekSheel Nepali Professional Help Desk सँगको अनुभव	के रिचार्ज कार्ड नङले कोर्दा क्यान्सर हुन्छ? →